Ihe ịtụnanya nke Black / African mara mma: site n'echiche ha, Black / African beauties na-akpali mmụọ dị ka okwute dị oke ọnụ, ha na-eme ka nghọta ha pụta ìhè ... (VIDEO)
Site na: KongoLisolona: April 25, 2020 00: 00 Enweghị asịsa
Na-atụgharị uche mgbe ụfọdụ na onyonyo a mara mma: you ga-aghota na ka ndụ wee gafere, ka ìhè gafere, ka mbara igwe gafere, anyị ga-emeghere ha ụzọ, ya bụ, ka anyị jiri echiche ziri ezi meghe, dị ka maka nghọta. "Ihe niile dị n'okike gosipụtara iwu a".
Mana gịnị kpatara eji atụ akụ dị oke egwu ji kpọrọ ihe? N'ihi na ha na-acha, n’ezie, mana karịa maka na ha na-ahụ ụzọ: ha n theme ka ìhè-ya gabiga (...). Olee otu okike siworo rụọ ọrụ nke ọma na ụfọdụ mineral, ime ka ha dị ọcha, nụchaa ha ka ha bụrụ ihe ịtụnanya nke anyị na-enwe taa. "Crystal, diamond, sapphire, ọla edo, emerad, topaz, ruby (...) dị ịtụnanya.
Ọ bụrụ na uwa gaziere, gịnị kpatara Man Black / African onye nwere mmụọ Chineke agaghị enwe ike ịrụ ụdị ọrụ a n'onwe ya?
Ogwu asusu ndi Africa anaghi eme anwansi: otutu ndi, ogwu ojoo na ndi amoosu jikotara aka wee mee ka ndi dibia ojoo ma obu ndi Africa ji ogwu gha aru oru.
Ọkt23 04: 40